Umthandazo kuSanta Barbara. ? Yemali, Uthando kunye noKhuseleko.
8 Ukufundwa kweMin
Umthandazo kuSanta Barbara. Uhluthwe phakathi kwabanye abafazi belizwe uSanta Barbara uyakufanelekela ukunconywa ngenxa yokuba wabona ubungqina bentiyo yalomntu ebefanele ukuba uyamthanda. Phakamisa enye umthandazo kuSanta Barbara Inokusinceda kwiimeko ezininzi kwaye nakwabo siphelelwe lithemba.
Ubomi bakhe emhlabeni ukholo lugcwele ziintlungu kunye nokubandezeleka, nangona kunjalo, wahlala emfazweni ngokulwa idabi lakhe kwaye nangona uloyiso lwalo utshaba lwalusondele, wafikelela kwisithsaba sokuya kuthenjiswa abangcwele abathembekileyo Balwa ngentliziyo.
Umfazi wokholo olungagungqiyo, womelele, othembekileyo kunye noogxa bethu ngexesha lentlungu.
1 Umthandazo kuSanta Barbara
1.1 Umthandazo weSanta Barbara ufuna imali
1.2 Umthandazo uSanta Barbara usikelelwe luthando
1.3 Umthandazo oya kwi-Santa Barbara usikelelekile ukhuseleko
1.5 Ukulawula iqabane elingathembekanga
Wayehlala emhlabeni ngamaxesha enkulungwane yesithathu eAsia Minor.
Kubomi bakhe wabandezeleka kakhulu ngenxa yeenkolelo zakhe zonqulo ukusukela oko baqubisana nabo bosapho. Imbali ithi ubawo wayelutshaba olomeleleyo lobuKristu ngelo xesha, inkolo eyathiwa nguBarbara ngokukhululekileyo.
Yayinguye, uDioscoro, utata wakhe, owamvalela kwigumbi elide kakhulu njengesohlwayo sokungafani kwakhe kwinkolo.
Ngexesha ebemgcina ezivalelekile uthembekile elukholweni, abhaptizwe kwaye ashumayele inkolo yakhe ngamaxesha onke.
Kuyatshiwo oko inqaba Wayenefestile enye kuphela kwaye wayalela ukuba kuvulwe ezinye ezimbini njengophawu lwe ubathathu emnye.
Xa utata wakhe wabuya, wamtshutshisa kwaye wafumana impatho-mbi kunye nokuthotywa kwaye yayinguDioscoro ngokwakhe owanqumla intloko yakhe ngekrele lakhe phezu kwentaba. Kuthiwa emva kolu gonyamelo kwabetha imitha evela ezulwini yaza yathatha ubomi bakhe.
Umthandazo weSanta Barbara ufuna imali
Inamandla uSanta Barbara, umlo, ndincedise ukuphumelela eli dabi.
Wena ongakhange uwele kwisilingo sobubi, wena obanga uthando lwakho, yonke imbandezelo, uphuma unqobekile, ndiyakucela ke ukuba uthethele uTHIXO, NKosi yethu, ukuba undincede ndikwazi ukujongana nalo mzuzu apho Avavanya khona.
Ngamana, ukusuka kwindawo yakhe yokuhlala entle, andinike yona amandla ngokwaneleyo apho okuhle kuya kuba okuphumeleleyo.
(Yenza isicelo sakho seMali sokuqala)
Owu Nkosi, ukuba unike uSanta Barbara amandla amangalisayo okumelana nezikrelemnqa ezinkulu kunye neentlungu zokuhlala uthembekile kuWe, sicela ukuba, njengaye, somelele ebunzimeni kwaye sithobeke kwinkqubela phambili ukuze sifezekise njengombono wakhe ongapheliyo.
NgoYesu Krestu, iNkosi yethu.
(yenza isicelo sakho sesibini seMali)
Usikelelekile uBarbara, obutyeshele ubunyulu bakho obucocekileyo ngeenjongo zegazi lakho luthando lweNkosi, undikhusele kwisaqhwithi, imililo, intlekele nayo yonke intlekele yeli lizwe.
Ndihlangule ukufa ngesiquphe. Ndingenelele eNkosini ukuze indincede ndiphumelele kobu bomi, ndihlale kubuhlobo obungcwele kwaye ndifikelele esiphelweni seentsuku zam ngoxolo kubabalo lukaThixo.
(yenza isibongozo sakho sesithathu semali)
Lo mthandazo weSanta Barbara ngemali unamandla!
Usifundise ukuxhomekeka kuThixo, ukukholelwa ukuba izithembiso zakhe zizalisekisiwe kwaye siphila kokuninzi nokuncinci. Utsho ohluphekileyo Inokusinceda siphumelele.
Ukuthandazela imali ukuba ize kuthi ngeli xesha lentlekele kubalulekile kwaye ukucela uSanta Barbara ngokholo sisenzo sentobeko ekufuneka siyenze yonke imihla.
Kukho imithandazo okanye imithandazo Banokusikhokela ukuba sibuze ngendlela eyiyo. Nangona kunjalo, into ebalulekileyo kunye nesiqinisekiso ekuphela kwaso ekufuneka sazi ukuba umthandazo wethu uviwe kukugcina ukholo luhleli.
Umthandazo uSanta Barbara usikelelwe luthando
Umlo wamazulu, usikelelekile uSanta Barbara, ulamkele izibongozo zam zothando ukuze ..
(yitsho igama lakho nelomntu wakho othandekayo)
Manya emzimbeni kunye nasemphefumlweni, ubakhusele ukuze kungabikho mntu ungene kwindlela yabo yolonwabo kunye nomanyano. Usikelelekile uBarbara oMhle othambisa iinwele zika (phinda amagama) qeda ukunxanwa kwabo kunye infinito Uthando ngeminqweno yabo elungileyo yobulungisa obungenakwenzeka kumlo wokukhusela aba bathandi banaphakade (phinda ulichaze igama lakho nelalowo uthandayo).
UTHANDO yenye yezizathu ezibangela uvuyo nosizi zixhaphakile kususela ekuqaleni kwexesha kude kube namhlanje.
Uthando lukayise kaSanta Barbara lwakhatywa kwintombi yakhe kwaye oku kwamkhokelela ekubeni enze isenzo esimanyumnyezi njengokucheba kwentombi yakhe.
Akukho mntu ungcono kunaye, owathiywa ngubani ongafanelekanga ukuba ayenze, ukuqonda iintlungu zethu kwimeko yokungaphindiswa uthando.
Lo mthandazo unokusinceda sikhulule kumandla amabi ukuze uthando lufikelele kuthi kwaye lusimangalise.
Umthandazo oya kwi-Santa Barbara usikelelekile ukhuseleko
Ntombi enguBarbara, ntombi esikelelekileyo, enamandla amakhulu, wanga uThixo angaba nawe, nam uhambe kum ngokulunga.
Ngekrele lakho ophumeleleyo, ndikhulule ebubini, ukungabikho kokusesikweni, umona, namehlo amabi. Ngamandla ombane, ndikhusele ezintshabeni zam, ndizukise umlilo we-cannon yam kwaye ikhuphe inokoyisa.
Ngendebe yendebe yakho kunye newayini gcina amandla omzimba kunye nomoya wokulwa nzima nokulwa.
Yamkela iiapile zam kunye nee-daisies njengomnikelo endihlala ndihlala ndicinga ngawo kwikhaya lam, kwaye ndiyakucela, ungaze undiyeke kwaye uza kum qho xa ndisithi ndikhusela ukholo lwam, umhlaba wam, usapho lwam kunye nosapho lwam. umzabalazo; kwaye ke ekukuphela kwexesha undikhokelela ebuqaqawulini njengawe.
Lo ngumthandazo omnandi wokuba uBarbara osikelelekileyo ukukhusela uSanta.
Isixhobo esinokuthi sisisebenzise xa siyifuna, umthandazo nawo usisihlangu sethu kwaye ungabi nxamnye neengozi kuphela kodwa uchasene nazo zonke izinto ezimbi ezikhoyo ebomini bethu okanye kwezo ntsapho zethu.
Kukho ubungqina obuninzi bamakholwa athembekileyo afumene impendulo ngexesha elifanelekileyo kuSanta Barbara ngexesha lentlungu, xa sicela ukukhuselwa thina okanye ilungu losapho liyasebenza.
Owu uthixo! kude necala lam, ebomini bam, ezi zinto zikhohlakeleyo nezingathandekiyo ezilangazelelayo.
Ndiza kuwe, uSanta Barbara ukuba ndibadidanise, bohlukane nam ukuze bangabi nako ukundenzakalisa kwaye ndiyakhala kunye nokholo ndikunika ubomi bam.
Wena, umkhuseli obalaseleyo wamadoda, umntu owusikeleleyo lowo ukubizayo kunye nomKristu onesisa ovula isifuba sakho ngezinto ezilungileyo, ndinike uncedo lwakho, kuye ndingena kuye kwaye ndiza kuphuma kuye ndinegazi lentliziyo yakho, ukuzikhulula kubo .
Shenxisa kum umona kunye nokungcatsha, ndikhusele, ndiyakucela ebubini nasezintshabeni, ukuba ububi bungandichukumisi kwaye intiyo ingandenzakalisi, gcina ummelwane ongendawo kunye nomhlobo ongendawo, ukudanisa iintshaba zam ukuze zingandichaphazeleki, ndincede ukulawula nabani na endifuna kakubi ukuze ndikwazi ukuphumelela nakweyiphi na imeko endikhathazayo.
Ungabavumeli ukuba baphazamisane nohambo lwam lobuKristu kwaye ukuba bayazingisa, esihogweni sisohlwayo njengendawo yabo.
Ndikhulule ndingcwele uBarbara osikelelekile kubo bonke ububi, ndikhulule ndingcwele uBarbara osikelelekileyo kuzo zonke iintshaba, ukhusele ubomi bam kwingozi ukuze ndiphile ngoxolo noxolo. NguYesu kunye neNtombi Enyulu.
Thatha ithuba lamandla alowo uthandekayo weSanta Barbara umthandazo weentshaba.
Sonke sinayo iintshaba zethu nakwindlu yethu. Siyayibona kwimbali yeSanta Barbara njengoko uyise wakhe wamhlaselayo ekufeni.
Awunangxaki yokuhlaselwa ngokuthe ngqo ngale ndlela kodwa ngekhe uxhomekeke kwiintshaba.
Umthandazo wolawulo lweentshaba eziphakamayo ukuya eSanta Barbara kunokuba kuphela kwendlela esinokuzikhulula ngayo kwintshutshiso nakwingozi.
Ukulawula iqabane elingathembekanga
Usikelelwe uSanta Barbara wena onokwenza abantu abaninzi baxolelane, undenzele inceba encinci, ndiya kufumana uthando, ndenze intliziyo yam icace kwaye iyinyani, yenza uthando, entliziyweni yam ungangena undizalise ngolonwabo, ndifuna Ukwazi uthando lokwenene, uvakalelo lokwenyani, uSanta Barbara wena onamandla amakhulu kuyo, ndinike olo thando, mabe isicelo sam kuwe, ukuze ndifumane intsikelelo yakho, uSanta uyamthanda, wothando olugqibeleleyo ngaphandle kobuxoki, wena ukuba unesidima kwaye umangalisiwe yiyo yonke into el mundo Yiza kum kwaye undinike ithuba lokufumana intsikelelo yakho, ndifuna elinye ixesha kuwe lokuthumela imithandazo yam.
Imithandazo yam kuThixo ukuze akwazi ukwenza ubomi bam bugcwele luthando, kugcwele uxolo ungayenza ngokungummangaliso uSanta Barbara, ndicela undinike uthando, uthando olungakumbi nothando olungakumbi, uvuyo olukhulu ulonwabo, iminqweno elungileyo, iingcinga ezilungileyo, Izenzo ezilungileyo, ndincede ndiphumelele kuyo, thanda, iya kuba yeyam njengenyathelo, umendo, uSanta Barbara, wena onokuthi wenze yonke into, ndinike kwaye ube nembono yenyani yothando uze kum, ndithembe amandla akho kunye ukulunga, amen.
Olu hlobo lomthandazo lisagxekwa kakhulu abanye abacinga ukuba sisenzo sokuzingca esenziwa ngokuzingca ukuba wenzakalisiwe okanye washiywa. Kodwa oku akuyonyaniso.
Ukuthandazela ukufumana ubukhosi phezu komntu okanye imeko ethile sisenzo sothando esiveliswa kukuphelelwa ngumnqweno wokufuna amandla angawenzi.
Umthandazo owenziwe ngokukholelwa uyakuhlala ufumana impendulo oyicelayo, nokuba ungasicela ntoni na, Umthandazo ka-Santa uBarbara osikelelekileyo unamandla.